साइकल चलाउँदा कम हुन्छ क्यान्सरको खतरा – Himalaya TV
Home » समाचार » साइकल चलाउँदा कम हुन्छ क्यान्सरको खतरा
साइकल चलाउँदा कम हुन्छ क्यान्सरको खतरा
८ बैशाख २०७४, शुक्रबार २२:०७
काठमाण्डौ, ८ वैशाख । के तपाई लामो जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ ? के तपाई क्यान्सरको खतरा कम गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि तपाई स्वस्थ जीवन चाहनुहुन्छ भने साइकल तपाईका लागि उत्तम विकल्प हुने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
अध्ययनको अनुसार साइकलको प्रयोगले मुटुसँग जोडिएका रोग र क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोगको खतरा पनि कम हुन्छ । बेलायतमा दैनिक आउने जाने गर्ने अढाई लाख (२ लाख ५० हजार) व्यक्तिहरुमा गरिएको अध्ययनले सार्वजनिक यातायात वा कारमा यात्रा गर्नुभन्दा पैदल हिँड्नु र साइकलमा यात्रा गर्नु नै धेरै फाईदाजनक भएको देखाएको छ ।
‘ग्लासगो’ टिमले एकपटक नियमित कार्यालय जाने वातावरणको सिर्जना भएपछि साइकल चलाउनको लागि कुनै इच्छाशक्ति जरुरी नहुने बताएको छ, जस्तै जिम जानको लागि इच्छात्शक्ति आवश्यक पर्दछ । पाँच सालको अध्ययनमा सक्रिय रहने व्यक्तिको तुलनामा ती व्यक्तिहरुसँग अध्ययन गरियो जो अधिक मात्रामा सक्रिय थिएनन् । जम्मा अध्ययन गरिएका मध्ये २ हजार ४ सय ३० को मृत्यु भयो, ३ हजार ७ सय ४८ जनालाई क्यान्सर भयो र १ हजार १ सय १० जनालाई मुटुसँग जोडिएका समस्याहरु देखियो ।
अध्ययनको क्रममा लगातार साइकल चलाउने व्यक्तिहरुलाई कुनै कारणवश हुने मृत्युको खतरा ४१ प्रतिशत सम्मले कम हुने पाइयो । यसमा क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको खतरा ४५ प्रतिशतले र अन्य रोगबाट मृत्यु हुने सम्भावना ४६ प्रतिशतले कम हुने गरेको पाइयो ।
बेलायतको क्यान्सर रिसर्चका क्लेयर हायड भन्छन्, ‘यो अध्ययनले मानिसको दिनचर्यामा लाभ दिन मद्दत गर्नेछ । साइकल चलाउनुस्, तपाईहरुलाई जिम जान र बिहान बिहान दौडनु पर्दैन ।’